Haddii Aanu Xataa 4-0 Guul Ku Gaadhno Oo Aanu Cristiano Ronaldo Gool Dhalin Wuu Waashaa- Xidig Juventus Ah Oo Soo Bandhigay Dabeecada CR7. - Gool24.Net
Cristiano Ronaldo ayaa la sheegay in uu waasho haddii aanu gool dhalin iyada oo xidig ka tirsan Juventus oo dhaqanka Ronaldo saxaafada la wadaagay.
Xili ciyaareedkiisii ugu horeeyay ayuu Cristiano Ronaldo ku dhamaysanayaa Turin iyada oo kooxdiisa Juventus seegtay hamigii ugu waynaa ee ahaa in ay Champions League ku guulaystaan.
Xidiga kooxda Juventus ee Rodrigo Bentancur ayaa sheegay in xataa haddii ay 4-0 guul ku gaadhaan oo aanu Ronaldo gool dhalin in uu waasho isla markaana waxa uu soo bandhigay sida uu guuldarada u neceb yahay.
Rodrigo Bentancur oo ka hadlaya xaalada uu Ronaldo galo haddii aanu gool dhalin ayaa yidhi: “Cristiano ma jecla in uu guuldaraysto, waxa uu doonayaa in uu guulaysto oo gool dhalyo”.
“Laga yaabee in mararka qaar aanu ku guulaysano 4-0 isla markaana aanu isagu gool dhalin, taas isagu wuu u waashaa. Laakiin sababtu waxay tahay hamigiisa” ayuu Rodrigo Bentancur sharaxaadiisa sii raaciyay.
Rodrigo Bentancur oo Ronaldo ka sii hadlaya ayaa yidhi: “Maskax guulaysigiisu waa waxa isaga ku hogaamiyay in uu ka mid noqday labada aduunka ugu fiican. Isagu waa guulayste, taasna kulan kasta ayuu ku muujiyay”.
Rodrigo Bentancur oo ka hadlaya sida uu Ronaldo kooxdiisa u dhex galay ayaa yidhi: “Guruubka ayuu la casheeyaa, qolalka labiska ayuu la joogaa, markastaba cashada kadib wuu nala sheekaystaa”.
“Layaab ayay leedahay. Waxaa na wada qancisay sida uu u tababarto. Marnaba ma jecla guuldarada, taasina waa waxa in isaga ku hogaamisay in uu wax badan ku guulaystay iyo in uu yahay waxa uu yahay’.